KULMIYE Party » Blog Archive » Shirka Golaha dhexe ee KULMIYE oo ka furmay iyo khudbado ay ka jeediyeen madaxweynaha iyo Guddoomiyuhu
Shirka Golaha dhexe ee KULMIYE oo ka furmay iyo khudbado ay ka jeediyeen madaxweynaha iyo Guddoomiyuhu
April 14th, 2012 in Kulmiye_party, Press | leave a response
Hargeysa-(KULMIYE.ORG)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo), ayaa furay shirweynaha Golaha Dhexe ee Xisbiga KULMIYE oo goor dhawayd ka furmay Hudheelka Maansoor ee caasimadda Hargeysa.
Guddoomiyaha Golaha Dhexe ee Xisbiga KULMIYE Jaamac Shabeel oo ugu horayn halkaa ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi, “Mudanayaal iyo marwooyin, xubnaha Golaha dhexe oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Silaanyo, martisharafta ergada ah waxaan marka hore idiinka mahadnaqayaa sida sharafta leh ee aad uga soo qaybgasheen kalfadhiga saddexaad ee Shirka Golaha Dhexe.
Waxaan u mahadnaqayaa Horn Cable Tv oo si toosa u sii daynaya munaasibaddeena oo si toosa adduunka looga daawanayo.” Ajandaha maanta waxa ugu horraysa khudbad uu inoo jeediyo Guddoomiyaha Xisiga Muuse Biix Cabdi, khudbadda Madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, ka dibna warbixinno ayaynu kala qaadan doonaa.”
Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo ugu horayn halkaa ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi, “Anigoo ka wakiil ah xubnaha Golaha dhexe iyo taageerayaasha xisbiga waan idiin mahadnaqayaa Madaxweyne iyo martisharafta.Ilaahay baa iska leh nimcadda nabadgelyada aynu haysano iyo duruufaha adage e aynu ka soo baxnay ee dalkeena wanaagiisa ka talino, Ilaaha ina garansiiyay xisbiyo talada dalka .
“Xisninimmadu waxay mideeyaan fikradaha muwaadiniinta, xisbinimmadu waxay abuurtaa nabadda, waxay ka hortagtaa nabadda oo waxay isu keentaa qaybaha kala duwan ee bulshada, dabadeed dadkaasa dan wadaag yeesha oo rayigeeda midaysa oo dhinaca wanaagsan u jihaysta. Waa meesha ay ka soo baxdo da’; yarta tallada dalka hoggaaminayaa, waa meesha ay bulshadu wadajirka, waana hab casriya oo bulshada caalamku.”ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE waxa uu nasiib wanaag ku tilmaamay in aas-aasihii xisbiga, ahna Madaxweynaha Somaliland uu kala soo qaybgalo, “Waxa nasiib wanaga in aas-aasihii xisbiga oo maanta ah Madaxawyneha Somaliland inuu halkan nagala soo qaybgalo.
Guddoomiyaha KULMIYE waxa uu sheegay in Xubnaha Golaha Dhexe qiimayn doonaan waxa ka fulay ballanqaadkii xisbiga KULMIYE, isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi, KULMIYE waa xisbiga qudha ee barnaamijkiisa siyaasadeed soo bandhigay. Golaha dhecxe wuxuu halkan u fadhiyaa inuu qiimeeyo ballanqaadkii KULMIYE galay waxa qabsoomay iyo waxa dhiman. Waxqabadka dawladda waxa laga qiimeeyaa koboca dhaqaalaha, waxaanay xukuummadii labadii sanno ee u danbeeyay waxay kordhisay dhaqalaha wadanka boqolkiiba sagaashan.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, ayaa furitaanka shirka ka jeediyay khudbad nuxurkeedu u badnaa waxqabadka xukuumadda mudada ay xilka haysay ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada. iyo nabadgelyada,
Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay waxyaabaha ka fulay ballanqaadkii xisbiga KULMIYE, “Waxaan u mahadcelinayaa taageerayaasha xisbiga iyo shacabka Somaliland Codkooda, cududooda iyo caqligooda ay iigu hiiliyeen doorashaddii Madaxtinimmadda, waxaanan ku dhiiriggelinayaa inay taageerada halkaa ka sii wadaan.
KULMIYE wuxuu u taaganyaha xaqiijinta him